FANDRANGITANA DOANY MIARINARIVO : Hatao amin’ny volana marsa
“Handrangitra” ny eny amin’ny doany Miarinarivo Mahajanga manomboka amin’ny volana ambony io. Manasa ny rehetra izay mandala ny fomban-drazana ny ampanjakabe Jean Noel, ary efa ao anatin’ny fanomanana tanteraka ny mpikarakara. 5 février 2019
Manafatra olo-maventy avy amin’ny zorontany efatra, lafintany valo sy izay mpanompo amin’ny doany ny ampanjaka, miantso ireo saha rehetra hanatrika ny “fandrangitana”. Ny atao hoe “fandrangitana” moa dia fanasinana ny fomba na famerenana ny hasin’ny toerana. Tsy dia fanao matetika izy ity fa rehefa tsapa sy hita fa misy tsy mety dia tanterahina izany. Tato ho ato dia maro ny fepetra noraisin’ny ampanjaka Jean Noel mikasika ny doany Miarinarivo efadahy manakasina ka anisan’izany ny fampanajana ny fady.
Maro ny zavatra nandalo tao amin’io doany io tato anatin’ny folo taona. Isan-taona dia anaty ady toerana foana ny mpitarika isaky ny hanomboka ny fanompoabe. Tamin’ny nitondran’ny ampanjaka Dezy no nilamina farany teny. Ankoatry ny ady efa misy amin’ny doany atsimo sy doany avaratra dia niadiana ihany koa ny toeran’ny ampanjaka tao amin’ny doany atsimo tao. Raha Rasamimanana no voafidy hisolo ny ampanjaka Dezy dia tsy nanaiky i Guy zanaky ny ampanjaka Dezy fa nitondra nandova an-drainy, nefa raha ny tokony ho izy dia tsy ifandovana ny fanjakana sakalava Boeny, hoy ny mpahay azy. Nisy ny ady dia nitondra nandimby an’i Guy Herimisy i Richard Djaofeno.
Nesorina indray izy dia naverina Rasamimanana. Ny 2017 dia Rasoamody ary ny farany teo dia saika tsy vita raha tsy nanohana an’i Rasoamody i Jean Noel. Taorian’ny fahavitan’ny fanompoabe ny taona lasa dia napetraka ho ampanjakaben’i Boeny i Jean Noel ka anisany fepetra noraisiny voalohany ny fanovana ireo mpiara-miasa amin’ireo ampanjaka hatrizay. Manantany I Vitabôja, ny ben’ny varavara Tiandraza, ary fahatelo i Tsimiambo. Mamerina amin’ny laoniny tsikelikely ny hasin’ny fivavahan-drazana ihany koa ny ampanjakan’i Boeny ka anisan’izany ny famerenany ny fampanajana ny fady. Hentitra tokoa ny ampanjaka vaovao ka mety hilamina amin’izay ny Doany efadahy manankasina. Isan-taona mantsy dia misy korontana hatrany mialoha ny fanompoabe… Misolo tsy folaka ny ampanjaka. Hanomboka tsy ho ela ny fikarakarana ny fanompoabe.